Soo degso Fouga Zephyr CM175 v1.1 FSX - Rikoooo
downloads 9 040
Zephyr Fouga waxaa lagu soo bandhigay in laba gaadmada ah:
- "Solo" qaabeynta la mid tijaabo ah
- "Dual control" qaabeynta, ie, iyadoo labo duuliye on board, model Tani waa tijaabo oo ka yeedhaya daboolkii gadaal
Dhowr kala duwan diyaarada dhab ah oo lagu daydo, kuwaas oo la soo bandhigay
si ay u sameeyaan isticmaalkeeda ka hawl duuliyaha dalwaddii:
- Gearwheel sanka waa steerable halka Fouga dhabta eryay dhulka la joojiyaha
- GPS a, a VOR / DME iyo pilot toos ah waxaa lagu soo bandhigay in labada daydo
Ma aha sida caanka ah sida uu "grand-walaalkaa", ee diyaaradaha Fouga Magister, Zephyr Fouga waa version ah ciidamada badda ee Fouga ah.
Bilowga konton konton ah, tababarayaasha Navy Faransiis, raadinaya hab qaran oo tababar duuliye ay, aad bayna u xiiso by barnaamijka Fouga ee horumarka Air Force Faransiis ah. version An ku habboon ee gaarka Navy la dhisay iyo 1956 July 31, ka Fouga CM170M noocooda ugu horeysay, oo la odhan jiray "Esquif", ka dhigay duulimaadkeedii ugu horeeyay. gadashada A of diyaarado 30 waxaa wargalin iyo gaarsiinta waxaa kullan u dhexeeya 1959 iyo 1961. Tani waxa ay ahayd amarka iibsiga hal of version diyaaradaha this, baxshay CM175 "Zephyr" si waafaqsan diyaarado kale oo Faransiis Navy waqtigan (Aquilon, Alize) isticmaalaya magacyada dabaylaha '. Oo weliba Zephyr Fouga waxaa loo isticmaalaa by badda ee Faransiiska, inta badan la Foch iyo sidayaal Clemenceau. Inta lagu jiro in ka badan soddon sannadood, Zephyr ayaa muujiyay isku halaynta iyo Xooga tayada ay ku hoos jira xaalad aad u daran isticmaalka
kooxda aerobatic An duulaya Zephyrwas abuuray 1961 by Navy Faransiis ah
U muuqda mid aad u la mid ah diyaaradaha Fouga Magister, Zephyr waxaa si kastaba ha ahaatee gartaa transformations muhiim ah. Aasaasiyan:
darfaha 2D iyo aaladaha: Jean-Pierre Langer
taliye Technical: Claude Marie (a Fouga Zephyr macallin pilot hore)
Aerospace-ka Ingiriiska Jetstream 31 / 32 FSX